KAMASOA ENY ANDRALANITRA Sarotra ny fifehezana ny olona tsy hivoaka saingy vita ihany
Tsy mora ny mifehy ny olona tsy hivoaka ny trano amin’izao fihibohana tsy maintsy hatao noho ny ady amin’ny coronavirus izao. Anisan’ny nisedra izany olana izany Mompera Pedro izay miahy ireo olona sahirana miisa 25.000 eny amin’ny Akamasoa Andralanitra. Raha araka ny
fanazavany mantsy dia nilana fanabeazana sy fanentanana goavana izany narahin’ny fizarana fanampiana ho an’ny isan-tokantrano. Mihoatra ny 4.000 tokantrano mantsy izy ireo k any an-tsasany dia tena sahirana avokoa. Ankoatra izay dia mbola omena sakafo atoandro isaky ny roa andro ireo ankizy ao an-tanana tena marefo izay miisa 600 amin’izao fotoana tsy hianarana izao raha mahatratra 9.000 rehefa amin’ny andavanandro. Nomarihin’ity mompera mpanao asa soa ity fa noho ny hateren’ny trano hipetrahan’izy ireo no tena mahakamo ny olona hijanona ao an-tokantranony raha manginy fotsiny ny tsy fahampiana izay tsy maintsy nitadiavany vahaolana. Na izany aza anefa dia nomarihiny fa nanaiky ny hihiboka avokoa ny rehetra hatreto izay arahiny maso isan’andro ho fiarovana ny ain’ny rehetra.